Ciidamada Soomaaliya ma dhar bay u baahan yihiin mise daryeel? - BBC News Somali
Image caption Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa xariga ka jaray warshadda sameyneysa direyska ciidamada
Taliyaha ciidanka Asluubta, Bashiir Maxamed Jaamac oo kamid ahaa mas'uuliyiinta booqatay warshadda ayaa sheegay in ciidammada Asluubta ay gacanta ku hayaan warshaddan islamarkaasna hal sano kaddib ay saari doonto dhammaan dharka ciidammada.
Dad badan ayaa isweydiinaya "sababta diiradda loo saari waayay daryeelka ciidanka, halkii direyskooda laga billaabi lahaa".
Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in dhismaha warshadda ay tahay horumar lagu tallaasaday balse daryeelka uu uga muhiimsan yahay ciidammada.
Faay Cali 'halyeeyadda' iyada iyo seeygeedii la wada dilay
Image caption Ciidamada Soomaaliya ayaan wali si buuxda gacanta ugu dhigin amniga
"Ciidanka imika joogo ee AMISOM, mushaarka ay qaataan haddii boqolkiiba 30 oo kaliya ah la siin lahaa ciidanka Soomaalida, waxaan anigu isleeyahay ammaanka dalka gacanta ayay ku dhigi lahaayeen" ayuu yiri Dr Cabdiwahaan Cabdisamad.
"Ciidanku waa dayacan yahay, ciidanku waa oynayaa, ciidanka wuu baahan yahay..adduunyaduna way dayacday, dadkii Soomaalida ahaana way dayaceen" ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
Image caption Ninka cimaamadda u duuban tahay waxaa uu xiran yahay tuutihii ciidammada dowladda